ဆောင်းပါး | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: ဆောင်းပါး
Avignon Thandar 11th Street (Zeyar Lynn)
A Sketch ofaLeading Artist of Myanmar Modernism
‘Done any new paintings this week, U Khin Maung Yin?’
‘Only one since I finished your portrait. Among that stack behind you.’
As was his custom, he had piled his paintings upright in reverse so that the paintings could not be seen.
As I turned each painting, I sawacolorful one.
‘That one, that one…’ his voice gestured.
Categories: Articles | Tags: article, ခင်မောင်ရင်, ဆောင်းပါး, kin maung yin, Zeyar Lynn | Permalink.
တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာဆီသို့ – ၄ (အောင်ခင်မြင့်)
– ပို့စ်မော်ဒန်စနစ်ကို အုတ်မြစ်ချခဲ့ကြသူများ – နစ်ရှေး၊ ဟိုင်ဒေးဂါး၊ ဖူးကိုး၊ ဒရီးဒါး/ ကျွန်တော်တို့ခေတ် အနုပညာ
[6 JPGs / 595 KB]
Categories: Articles | Tags: article, Aung Khin Myint, တိမ်လွှာမို့မို့လွင်, ပို့စ်မော်ဒန်, ဆောင်းပါး, အောင်ခင်မြင့်, modernist poetry, post modern | Permalink.
တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာဆီသို့ – ၃ (အောင်ခင်မြင့်)
– ဇော်ဇော်အောင်/ ဆင်မြူရယ်ဘက်ကပ်နှင့် အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ပြဇာတ်/ ထက်ထက်မိုးဦးနှင့် Popယဉ်ကျေးမှု/ သေခြင်းတရား/ အနုပညာအပေါ် သဘောထား ပြောင်းလဲခြင့်း
[6 JPGs / 488 KB]
တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာဆီသို့ – ၂ (အောင်ခင်မြင့်)
– (နေမျိူး/ အထီးကျန် လူအုပ်ကြီး/ လူကြိုက်နည်းတဲ့ အနုပညာ/ ကဗျာသေဆုံးခြင်း/ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသယဖြစ်မှု)
[5 JPGs / 584 KB]
ကျွန်တော်နှင့် ကျွန်တော့်ဝတ္တုတိုများ (သစ္စာနီ)
Categories: Articles | Tags: article, သစ္စာနီ, ဆောင်းပါး, Thit Sar Ni | Permalink.
အတောင်ပံနှင့်လူသား သို့မဟုတ် ဂျိမ်းစ်ဂျွိုက်စ် (သစ္စာနီ)
Categories: Articles | Tags: သစ္စာနီ, ဆောင်းပါး, Thit Sar Ni | Permalink.
by lanolay	5 Comments
တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာဆီသို့ (အောင်ခင်မြင့်)
“မှိုင်းပြာရီညို့ တိမ်လွှာမို့မို့လွင်”ကား မြို့မငြိမ်း၏ သီချင်းဖြစ်ရာ “တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာဆီသို့ ” ဆောင်းပါးစဉ်ကား မြို့မငြိမ်းခေတ်မှ ယခုခေတ်ကာလသို့ ဘယ်သူတွေက ဘယ်သို့ ချီတက်ခဲ့လေသနည်းဟူသော ကောက်ကြောင်းဖြစ်လေသည်။ စစ်တမ်းနှင့် စာတမ်းအဆင့်ထိ မဟုတ်ပါ။ လူငယ်တစ်ယောက်၏ ရှုမြင်ချက်မျှသာ၊ ထိုသူတစ်ယောက်၏ ယူဆချက်တစ်ခုကား ထိုချီတက်ရာလမ်းကြောင်းတွင် အရေးကြီးသော စာရေးဆရာ၊ အနုပညာသည်များမှာ ထော်လော်ကန့်လန့်သမားများ ဖြစ်သတဲ့၊ သူက Contrary ဟူသော စကားလုံးကို ထော်လော်ကန့်လန့် ဟူ၍ မြန်မာပြန်သည်။ အစဉ်အလာနောက်သို့ မလိုက်သူများ (၀ါ) အသစ်တစ်ခုခုတော့ လုပ်ကြည့်ချင်သူများ၊ လုပ်လိုသူများဟု ဆိုလိုသည်။
တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာဆီသို့ (အပိုင်း – ၁)
(အဖွင့်တီးလုံး/ မြို့မငြိမ်း/ ၁၉၆၀၊၇၀နှစ်များ/ ဆိုရှယ်လစ်လွန် ဟင်းလင်းပြင်/ ထူးအိမ်သင်၏ သက်ငြိမ်/ ကတ်ကိုဘိန်း၏ သြဇာ/ မော်ဒန်ကဗျာ)
တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာဆီသို့ (အပိုင်း – ၂)
(နေမျိူး/ အထီးကျန် လူအုပ်ကြီး/ လူကြိုက်နည်းတဲ့ အနုပညာ/ ကဗျာသေဆုံးခြင်း/ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသယဖြစ်မှု)
တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာဆီသို့ (အပိုင်း – ၃)
(ဇော်ဇော်အောင်/ ဆင်မြူရယ်ဘက်ကပ်နှင့် အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ပြဇာတ်/ ထက်ထက်မိုးဦးနှင့် Popယဉ်ကျေးမှု/ သေခြင်းတရား/ အနုပညာအပေါ် သဘောထား ပြောင်းလဲခြင့်း )
တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာဆီသို့ (အပိုင်း – ၄)
(ပို့စ်မော်ဒန်စနစ်ကို အုတ်မြစ်ချခဲ့ကြသူများ – နစ်ရှေး၊ ဟိုင်ဒေးဂါး၊ ဖူးကိုး၊ ဒရီးဒါး/ ကျွန်တော်တို့ခေတ် အနုပညာ)
တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာဆီသို့ (အပိုင်း – ၅)
တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာဆီသို့ (အပိုင်း – ၆)
Categories: Articles | Tags: Aung Khin Myint, စာတမ်းငယ်, ဆောင်းပါး, အောင်ခင်မြင့်, lanolay | Permalink.